Bit By Bit - Mass mmekota - 5.5.2 leverage heterogeneity
Ozugbo ị kpaliri ọtụtụ ndị na-arụ ọrụ na a n'ezie na nkà mmụta sayensị nsogbu, ị ga-achọpụta na gị sonyere ga-enwe heterogeneous na n'ụzọ abụọ bụ isi: ha ga-adị iche na nkà ha na ha ga ịdị iche na ha dị larịị nke mgbalị. The mbụ ihe ọtụtụ na-elekọta mmadụ na-eme nnyocha bụ na-ewepu ala àgwà sonyere na mgbe ahụ anwa-anakọta a ofu ego nke ozi site na onye ọ bụla hapụrụ. Nke a bụ adịghị mma na-chepụta a uka mmekota oru ngo.
Mbụ, ọ dịghị ihe mere ewepu ala ọkà sonyere. Na-emeghe oku, ala ọkà sonyere ime ka ọ dịghị nsogbu; ha onyinye na-adịghị na-afụ ụfụ onye ọ bụla ha na-anaghị achọ ihe ọ bụla oge inwale. Na mmadụ mgbakọ na-ekesa data collection oru ngo, na aka nke ọzọ, ndị kasị mma ụdị nke àgwà akara na-abịa site redundancy, ọ bụghị a nnukwu mmanya maka ikere òkè. N'ezie, kama ewepu ala nkà sonyere, a mma ime bụ inyere ha aka mee ka mma onyinye, dị nnọọ ka ndị na-eme nnyocha na eBird mere.
Nke abụọ, ọ dịghị ihe mere na-anakọta a ofu ego nke ozi site ọ bụla na-. Na-ekere òkè ọtụtụ uka mmekota oru ngo bụ incredibly ahaghị (Sauermann and Franzoni 2015) na obere ọnụ ọgụgụ nke ndị so na ọtụtụ-akpọ mgbe ụfọdụ abụba isi kpọkwara a ọtụtụ ndị so a obere-akpọ mgbe ụfọdụ ebe ọdụ ogologo. Ọ bụrụ na ị na-anakọta ozi site na abụba isi na ọdụ ogologo, na ị na-ahapụ tọn ọmụma uncollected. Dị ka ihe atụ, ọ bụrụ na Wikipedia nabatara 10 na naanị 10 edits kwa nchịkọta akụkọ, ọ ga-atụfu banyere 95% nke edits (Salganik and Levy 2015) . N'ihi ya, na uka mmekota oru ngo, ọ kasị mma leverage heterogeneity kama ịgbalị ikpuchi ya.